Iyini imali ekhokhelwa kusengaphambili futhi isebenza kanjani? | Ezezimali Zomnotho
Iyini imali ekhokhelwa kusengaphambili futhi isebenza kanjani?
USusana Maria Urbano Mateos | | Imali
Ukuthuthukiswa komholo noma ukukhokhelwa ngaphambi kwesikhathi sokuhola kuyilungelo lomsebenzi okufakwe eSitatimendeni Sabasebenzi, ku-athikili 29, lapho kubalulwa khona ukuthi “umsebenzi futhi, ngokugunyazwa kwakhe, abamele umthetho, bazoba nelungelo lokuthola, ngaphandle kokufika kosuku olubekelwe ukukhokha, ukukhokhelwa ngaphambi kwesikhathi ngenxa yomsebenzi osuwenzile ”.
Le nketho ekhona yabasebenzi iphinde icabange ngezivumelwano ezihlangene njengengxenye yemithetho yazo okufanele yenziwe; Into yokuqala okufanele ibhekwe ukuthi le nketho ayisho ukuthi umsebenzi unelungelo lokucela ukuthi akhokhelwe izinyanga eziyisithupha ezizayo zomsebenzi, kodwa ukuthi lokhu inketho icabanga kuphela isicelo semali ehambelana nesikhathi sokugcina esisetshenzisiwe futhi lokho akukakhokhiswa. Ngaphezu kwalokho, kufanele kuqashelwe ukuthi ayikwazi ukweqa okulingana no-90% womholo ozuziwe kuze kube yilapho isicelo senziwa.
Ukuze sikuqonde kangcono lokhu sizobeka isibonelo lapho isisebenzi esinomholo wanyanga zonke sama-euro angama-1000, senza isicelo imali ekhokhelwa kusengaphambili Ngosuku lweshumi lwenyanga, ngokusho okwashiwo phambilini, isisebenzi sinelungelo lokucela ubuningi bama-90% emali ehambelana naye kuze kube yilolo suku, kulokhu, lilingana nama-euro angama-299.
Este kusengaphambili nge-akhawunti, ngokomthetho kuhlala kudonswa emholweni okhokhelwayo ohambisana nenyanga elandelayo okwenziwe ukuthi lusebenze; Ngaphezu kwalokho, le mali ekhokhelwa kusengaphambili ayikwazi ukucelwa njalo, ngoba lesi simo simele okwehlukile kumbuso jikelele maqondana nesikhathi sokukhokhelwa kwemiholo, okuxhaswa ngokomthetho. Lokhu kungenxa yokuthi lesi simo sicabanga ukulungiswa komgcinimafa wenkampani.
Kodwa-ke, lokhu okuchazwe ngenhla yicala eliqine kakhulu elingatholwa, ngoba empeleni i Izivumelwano eziqoqiwe lapho intuthuko ilawulwa ngaphansi kwenkampani ngayinye noma emkhakheni ngamunye ziyaguquguquka. Ngale ndlela kunezinkampani ezithile ezivumelayo ezinye izinhlobo zentuthukoIcala elilodwa limayelana namaholo angakatholwa kanye nemisebenzi engeke yenziwe, kulezi zimo umthethonqubo uvame ukufundeka kanje: "lapho kulethwa phambili hhayi usuku lokukhokha umholo kuphela kodwa nokuqoqwa okufanayo kwelungelo."
Imithethonqubo lezi zivumelwano ezinayo imvamisa kungamacala okufaka isicelo, imvamisa axhunyaniswa Izindleko ezingajwayelekile noma izidingo eziphuthumayo nezifanelekile ngumfakisicelo, Ezinye izici zomlando nazo zivame ukungenelela, njengeminyaka yokusebenza kwenkampani noma isikhundla umfakisicelo akuso.
Imithethonqubo ekhona ngenxa yemali eyenziwe phakathi kwenkampani nesisebenzi nayo iyizinto ezibalulekile kusukela lapho ngokomthetho akukho okuvimbela ukucela inani elikhudlwana njengesengaphambili futhi ngivumelana ngokuthi ungayikhipha kanjani noma uyikhokhe kanjani, noma kunjalo, lokhu empeleni kungabonakala kufana nokubolekwa imali kunangaphambili.
1 Imali mboleko kubasebenzi
2 Ukucatshangelwa kokucela imali ekhokhelwa ngaphambi kwesikhathi
3 Ngaphambi noma ukubolekwa kwemali
Imali mboleko kubasebenzi
Kucatshangelwa ezinye izivumelwano ukubolekwa kwabasebenzi. Ezinye izivumelwano azizicabangeli futhi ukuvunywa kwazo kuncike kakhulu kunqubomgomo yenkampani futhi kuzoxoxiswana ngakunye.
Lezi mboleko empeleni zifana kakhulu nekhredithi ejwayelekile umehluko wawo omkhulu ngokukhokhelwa kwemali okuholela ngayo ukuthi kulezi zikhathi imali enikwa isisebenzi kufanele ibuyiswe, inenzalo noma ingenayo inzalo. Kukulezi zimo lapho inkampani isebenza njengenhlangano yezezimali, ethi nge inhloso yokuqinisekisa ukubuyiselwa kwemali ibeka imibandela efana nomnqamulajuqu wembuyiselo, inani elizokhokhwa, phakathi kokunye
Le nkampani yiyo futhi enquma ukuthi umsebenzi uhlangabezana nazo zonke izidingo, khona-ke umqashwa kufanele agcwalise ifomu elizovame ukulethwa ngumnyango wezabasebenzi ukuze akwazi ukwenza isicelo esisemthethweni. Ngemuva, bobabili inkampani nomsebenzi bayasayina inkontileka yemalimboleko.
Ukuphathwa kokubalwa kwemali kwalezi zimali mboleko kunzima kakhulu, ngoba izinkampani aziyona ingxenye yezezimali eyi-100%. Ezimweni eziningi inkampani ibeka inzalo ephansi kunaleyo evame ukutholakala emakethe; Kungenxa yalokhu lapho ibhizinisi lezezimali licabanga ukuthi umehluko unokubhekwa kokusebenza komsebenzi. Ngakho-ke, lo mehluko kufanele umenyezelwe kwimbuyiselo yentela ehambisanayo.
Ukucatshangelwa kokucela imali ekhokhelwa ngaphambi kwesikhathi
Cishe, wake wacabanga ukucela ukukhokhelwa ngaphambi kwesikhathi ukuze ubhekane nezindleko ezeqe ngaphezu kwalokho obekuhleliwe noma obekulindelwe. Futhi lokhu kujwayelekile namuhla ngoba uma sibheka ukuqina komnotho womuntu ngamunye okudalwe yinkinga, abasebenzi abaningi banquma ukuthatha isinqumo sokucela imali engaphambi kwesikhathi noma yomholo wabo enkampanini. Ngandlela thile, kungashiwo ukuthi kuyimali mboleko eyenziwe yinkampani lapho isiqinisekiso sokukhokha kungumsebenzi ofanayo wesisebenzi. Futhi noma kuyindlela enhle yokunqoba ubunzima bezezimali, kufanele uhlale ukhumbula njalo izivumelwano phakathi kwabasebenzi nezinkampani, ngaphezu kwemithethonqubo yomthetho wamanje wezabasebenzi.
Indlela ekhona yokukwazi ukuthola ifayela le- ukukhokhelwa kusengaphambili ngaphandle kwalokhu kufaka ukuphazamiseka ukuthi bobabili umthetho njengoba ukukhokhelwa kusengaphambili require, yi Imali Esengaphambili. Le fomethi ingabhekwa njengokubolekwa kwemali okukhokhwa ngokungathi kungukuthuthuka komholo, ngoba imalimboleko yenziwa ukuze usuku lokukhokha kanye nosuku lokungena kwabasebenzi kuqondane. Lokhu kusiza ukuthi kususwe imikhawulo ekhona lapho ucela ukukhokhelwa kusengaphambili kwamaholo. Ngandlela thile, kungashiwo ukuthi inkampani inika isisebenzi imalimboleko encane, eqanjwe inani lemali eliceliwe kanye nesikhathi okumele ikhokhwe ngaso; Kodwa-ke, yize kuyimali mboleko eqinile yokuhlangabezana nezinkinga ezithile zezezimali noma ezinye izindleko ezingeziwe ezingabonwa yisisebenzi, kungaphathwa njengemali ekhokhelwa kusengaphambili ngenxa yale mibandela eshiwo ngenhla, okuwukuthi, usuku lokubuya kanye nomdlalo womholo.
Inhloso okwenzelwe ngayo lezi zimali mboleko ezincane ukukwazi ukubhekana nezidingo zezimali zomuntu othile odinga imali elinganiselwe ngesikhathi, ukhonkolo futhi kuncike esikhathini esincane kakhulu sokukhokha. Kuyimali mboleko eyenzelwe ukuhlangabezana nezidingo zesisebenzi esidinga imali yokukhokha izindleko zemvelo ezingavamile futhi eziphuthumayo. Yize imali ekhokhelwa kusengaphambili ingachazwa njengemali eshibhile yezimali, ayisebenzi ngenxa yezimo zezimali zezisebenzi; Le mali mboleko, yize kungenjalo ngqo, kusengukuthuthuka komholo okwenziwa enkampanini (Kungenxa yalesi sizathu ukuthi kungabizwa ngokuthi kusengaphambili kokukhokhelwa kwabasebenzi), kepha ngemithetho ethile kanye nezimpawu ezihluke kakhulu kulezo ezilawula .Iholo, ngaphezu kokuba nezici ezithile.
Ngaphambi noma ukubolekwa kwemali
Uma sesihlukanisile kusengaphambili komholo, kusukela kusabelomali esedlule, sizoqhubeka nokukhuluma ngefayili ye- izinzuzo nobubi ukuze ukwazi ukukhetha inketho enhle phakathi kwalokhu okubili. Izinzuzo i Imali Esengaphambili Izipho ngokukhokhelwa komholo okuceliwe enkampanini yilezi: ijubane lokuphendula noma ukushesha, ubumfihlo nokuzimela ukuthi lolu hlobo lwezipho zangaphambi kwesikhathi nazo ziyinzuzo. Yebo, ekuqhubekeni njalo akudingekile ukuthi unikeze noma unikeze izincazelo kubaphathi, ngoba ngesikhathi kwenziwa konke kucelwa futhi kugunyazwe ngendlela ehlakaniphile. Lapho isikweletu sesigunyaziwe, imali ehambelana nayo ifakwa kwi-akhawunti yanoma yiliphi ibhange isisebenzi esithandayo ngokushesha, lokhu kube yinzuzo ku-bureaucracy enenqubo yokucela ukuthi kusetshenziswe imali ekhokhelwayo enkampanini. Lokhu kusengaphambili okungaqondakali kuyimali ebolekiswayo engakhokhiswa noma ikhokhwe kusengaphambili, ize yehlise nezindleko zenani elitholakele kuze kube usuku lokukhokha. Ngokufingqa, ukukhokhelwa kwemali ekhokhwayo ngaphambi kokubalwa kwemali kuyindlela ehlakaniphile, esheshayo nephumelelayo yokuba nomholo kusengaphambili ngaphandle kokunikeza izincazelo enkampanini kanye nempendulo esheshayo.
Manje yize lesi sikhathi se kusengaphambili kunezinzuzo eziningana futhi kunezinkinga, kepha lokhu akuhambisani nenqubo njengasezenzweni kodwa kubasebenzi ngoba akufanele ikhohlwe ukuthi yize beyizimalimboleko kumele baqhubeke nokuthathwa njengemali ekhokhelwa ukuhola, ngakho imali kufanele ibuyiselwe ngokuqinile ukuyikhokha kanye neholo elilandelayo elikhokhiswayo, ngoba uma lokhu kungenziwanga, izindleko ezibandakanya le mali mboleko zizokwenyuka ngokushesha.
Njengephuzu lokugcina sizothi yize le nketho kusengaphambili ikhona ezinkampanini, ingasetshenziswa kuphela njengesisetshenziswa esiphuthumayo, futhi le nketho kufanele isetshenziswe ngendlela eyeqile, ngoba uma lokho okudingekayo kunguhlobo lwesakhiwo ukuxhasa ngezimali ungaya futhi kufanele uye emthonjeni oshibhile wezezimali, ukuze wonge imali eningi ngangokunokwenzeka ngesikhathi senqubo.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Imikhiqizo yezezimali » Imali » Iyini imali ekhokhelwa kusengaphambili futhi isebenza kanjani?
UTamara santana kusho
kufanele zibe mfushane, zingabi nalutho oluphathekayo.
Phendula uTamara Santana
Ngabe ufuna ukuba neholo elengeziwe minyaka yonke?